MAHAFINY Mitsubishi F-1 FSX - Rikoooo
Downloads 12 298
Nosedraina OK niaraka FSX + FSX-SE
Mpanoratra: Model design by Daisuke Yamamoto Voahangy avy amin'ny Hiroaki kubota (KBT) Effect xml gauge dia natao tamin'i Toshikazu Shimizu. Ampifanarahana amin'ny asa OK FSX nataon'i Danny Garnier
Mitsubishi F-1 no ady voalohany natao sy nanamboatra fiaramanidina any Japana hatramin'ny faran'ny ady lehibe faharoa. Miorina amin'ny Mitsubishi mpanazatra ny mandroso T-2, ny tena antony io vorona, araka ny natao ho an'ny rivotra ny ranomasina ady, dia ny miatrika levitra Air mba etỳ ambonin'ny lasibatra koa, izany dia ahitana voafetra koa ny fahaizany ho an'ny rivotra ambony asa fitoriana. 77, F-1 no nahavonjy, ny miasa ny fiainana nanomboka tamin'ny faramparan'ny 70 '. Variant amin'izao fotoana izao io no nosoloina ny farany Mitsubishi F-2 (Web-source: Wikipedia)
Io modely tampina aza dia ahitana fanitsiana sy upgrades. Ny fisehon'ny ny Mitsubishi F-1 mampahatsiahy ny jaguar.
Eto ahitana efatra variants:
-Mk82 Ivelany baomba entana
-ASM-1 sy ASM-2 navy balafomanga
Ny AI modely ihany koa ny tranonkala azo antoko. Ny virtoaly cockpit dia tsaboina amin'ny photorealistic textures, tany am-boalohany fonosana tsy misy kilema, Auto nstallation fomba est disponible. A tsy maintsy-manana.